Indlela yokufeza umgomo
Kulo mpilo udinga ukwazi ukuthi umgomo wakho uwuphi, lapho uhamba khona, lokho okufunayo ekuphileni. Umgomo ushintsha kakhulu isiqondiso, ngakho kufanele kube sobala, kufanelekile kuwe. Kunzima ukukhetha, futhi kunzima ukufeza umgomo. Ngoba kudinga ukugqugquzela, ukholo, amandla amaningi. Umgomo kumele ufunwe, kumele ufune zonke izindlela. Lapho siqala ukuhlela ukuthi singayifeza kanjani umgomo, kungase kubonakale sengathi kulula, kepha ngesikhathi sibhekana nezinkinga eziningi okungezona wonke umuntu angakwazi ukunqoba. Ngakolunye uhlangothi, indlela yokufeza imigomo ebekwe ngayo kunzima kakhulu, uma ungazi ukuthi ungayenza kanjani, ukuthi yini okumele ulungele ukuyibeka, ukuzibeka ngokweqile ngokwengqondo ... futhi ngokujwayelekile, kunzima kakhulu kubantu abangenasici. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, uma wazi kahle ukuthi uqhubeka yini, ukuthi yini okufanele uyenze, lokho okuzohlangana nakho ngenkathi ufeza okufunayo, khona-ke kungaba lula ukwenza lokho. Kudingeka sikhumbule imithetho embalwa ebalulekile, futhi into esemqoka ukuyifuna kakhulu. Khona-ke uzophumelela. Indlela yokufeza imigomo ebekwe ngayo, enkulu noma encane, i-athikili yanamuhla.
Okokuqala ukuthi yini, ngokujwayelekile, udinga imigomo nokuthi iyini. Umgomo ungaba into engacacile noma ebonakalayo, kodwa okwamanje ayinakuqondakala. Kubonakala ukuthi uyayifuna futhi uyayidinga, ngakho-ke ikuqhubela ezenzweni ezithile. Kusukela kulokhu kulandela ukuthi umgomo uyinto efunayo noma engazi lutho yento, umphumela lapho inqubo iqondiswa khona. Uma umgomo wakho ukufika phezulu kwentaba, khona-ke uzoba khona isikhathi eside futhi kunzima ukugibela kuze kube yilapho ufika khona. Umphumela wukuthi uzoba phezulu, uzothola imizwelo ngenxa yalo - lokhu kwakuwumgomo, ngenxa yomsebenzi othile. Yini esinayo kule ncazelo? Ilula kakhulu futhi, ngesikhathi esifanayo, ukubaluleka okubaluleke kakhulu: ukufeza umgomo obekiweko akumelwe ube yize.
Uma uthemba ukuthi uma ukholelwa ngokuqinile emgomweni, khona-ke uzofika kuwe ngokwakhe, khona-ke uyiphutha kakhulu. Indodakazikazi ngeke ihlangabezane nesikhulu ngaphandle kokuthi iphume embhoshongweni wayo, noma ithumele izincwadi kuzo zonke izifunda mayelana nesicelo sokukhululwa, ukuze abantu bantwanyana bazi ukuthi ukhona. Ayikho indawo yonke, kungakhathaliseki ukuthi inamandla kangakanani, angeke iphakamise intaba kuwe ngamandla okucabanga nokukholwa kwakho. Ukholo lusisiza ukuba sifinyelele umgomo, sinqobe ubunzima. Kodwa, njengoba iBhayibheli lisho, ukholo ngaphandle kwesenzo lufile. Thatha inothi.
Ngesikhathi esifanayo, umuntu akufanele akhohlwe ngokuzethemba nokukholelwa emandleni akhe nezifiso zakhe. Lokhu kuyoba umthetho wesibili. Izinkinga eziningi futhi ziphelela ngenxa yokuntuleka kokholo noma amandla. Kusukela ekuqaleni kufanele uthathe isinqumo ngokuqinile ukuthi lokhu kuyinjongo yakho, futhi uzoyifinyelela, ukuthi uyakwazi ukuthinta iqoqo iphupho, futhi uzolilwa kuze kube sekugcineni. Udinga isisusa, udinga isifiso. Uma ungenayo amandla okwanele - zicabange usuvele useduze nomgomo ofinyelelwe, ngakho-ke, ujabulela kanjani umphumela. Imicabango enjalo ingakunika amandla phakathi nomzabalazo wakho. Isibonelo, uma ungekho ekhaya futhi awusenamandla okufinyelela emngceleni, ungabaza ukuthi ungasinda yini, khumbula ukuthi ubani okulindele, okuzokwenzeka uma ubuyela, ubuso babathandekayo bakho. Futhi-ke, ucabange okuhle kakhulu - yiya kokugcina.
Nakuba ngokuvamile ukuhlangabezana nezifiso zabo, beka imigomo futhi uyifeze kungaba yinto encane. Ngokushesha ungase uzizwe futhi ukuthi ulahlekelwe okuthile. Noma ukungabaza ukuthi yilokho okwakulindele ngempela. Futhi imicabango enjalo mayelana nokufezeka kwayo angeke iluleke iqiniso futhi konke kungase kuvele kuhluke kakhulu kulokho okulindeleke. Ngakho cabanga ngokucophelela ngemiphumela, ukuthi ngabe uyayidinga ngempela noma cha. Musa ukudidisa iphupho kanye nomgomo nge-obsession. Isibonelo, uma usukhubekile ngaphambili, ungabuyiseli namuhla, mhlawumbe bangabantu abahluke ngokuphelele kunokuba basebencane. Noma ungaba nokuphushulwa kwentsha nobuntwana umfana omuhle endaweni ohlala ngayo ethandweni. Kodwa uma esezibandakanya kakade, cabanga ukuthi kungafanele yini ukuchitha impilo yomunye umuntu ngenxa yokuphoqa? Ingabe lo mgomo uyokuletha injabulo? Ingabe kunengqondo? Ngakho-ke, umthetho wesithathu wukuthi izinhloso kufanele zikhethwe ngokuhlakanipha.
Ukubusa kwesine kuyindlela yokufeza umgomo. Kudingeka kucatshangelwe ngokucophelela, kungaba yisihluthulelo sempumelelo. Uma uchaza ngokucacile umgomo, qala ukucabanga ukuthi kungenzeka yini ukuyifinyelela, uma kunjalo, ngayiphi indlela. Lokho amakhono akho angasetshenziswa kulokhu, lokho okudingayo kulokhu, unakho konke okudingayo, uma kungenjalo, ukuthi ungayithola kanjani. Cabanga ngalezo zonke imininingwane, cabanga kahle ngecebo lonke. Uma kucacile nakakhulu, kungcono, kodwa kufanele futhi kuqashwe ukuthi ezinye izikhathi azikwazi ukuqagela, cabanga ngendlela enhle kanye nezinye. Kukhona ukucaphuna okuhle kule sihloko - ukunqoba kudinga ukulungiselela. Futhi esimweni esinomgomo, kuyiqiniso ngempela. Cabanga kahle ukuthi ungayifinyelela kanjani nokuthi yini efanelekile kuwe. Ukuqeda zonke izindlela ezimbi, kanye nalabo abangela ukuthi umuntu ahlupheke. Ungazibeka engozini, noma ubeke engozini impilo yakho noma othandekayo bakho. Akukho mgomo walokhu okufanelekile.
Ungesabi lutho - akukho ubunzima obungase buvele. Uma ukholelwa kuwe ekuqaleni kohambo, khona-ke asikho isizathu sokungabaza. Ungangabazi ngisho nalapho kubonakala sengathi usuke usuka emgomweni, futhi isikhathi siphelile. Yonke isikhathi sakho. Into esemqoka - yenza konke ukwenza umgomo ufezeke. Bheka izindlela ezintsha zokufeza.
Enye iqhinga elithakazelisayo - ungakhohlwa ukuzikhuthaza endleleni eya emgomweni. Uma ususondele kuye, wathola indlela entsha, uphumelele ngempumelelo isithiyo esikhulu - uzenze isipho, wenze into engavunyelwe ngaphambi noma engekho. Ukukhuthazwa kuzokusiza ukuthi ugcine isisusa kanye nesithakazelo, ngoba ngokuvamile kwenzeka ukuthi umgomo uzogcwaliseka, nakuba singayifuni. Ngakho-ke, ungakhathali, sebenzela ukuze kuzuze umgomo - kodwa ngokulinganisela. Khumbula ukuthi ayikho imigomo efanele impilo yakho.
Indlela yokujabulisa iziphathimandla
Izinzuzo ezicacile zowesifazane phambi komuntu
Kuye amakhanda aphethwe
Ukugcoba ngegalikhi kanye ne-avocado
Othobekile uMaria Kruglyhina ovela "eNdlu-2" izithombe ezishaqisayo ezivela endlini yokugezela
Ama-Toys aphansi e-Felt
Ungamlahla kanjani indoda ocansini ngaphandle kokumcasula?
Ikhekhe lezinhlanzi ezenziwe ngenhlama